प्रेम र विवाह - एजेन्सी संस्करण Martech Zone
प्रेम र विवाह - एजेन्सी संस्करण
मङ्गलबार, अप्रिल 8, 2014 बिहीबार, जुन 18, 2015 Douglas Karr
हाम्रो एजेन्सी, Highbridge, अहिले करीव years बर्ष भन्दा बढी भइसक्यो र हालसालै प्रक्षेप परिवर्तनको घोषणा गर्‍यो। गत वर्ष, हामीले वास्तवमै हाम्रा स्टाफलाई अगाडि बढायौं र त्यस पछि धेरै कठिन ग्राहकहरू लियौं जुन लगभग हाम्रो मृत्युको कारण बन्न पुग्यो।
हामीले अचम्मका ग्राहकहरूसँग केही अविश्वसनीय सम्बन्धहरू बनाएका छौं - जसमध्ये धेरै जसो धेरै वर्षदेखि हामीसँग छन्। हामी उनीहरूलाई माया गर्छौं र आशा छ कि उनीहरूले हामीलाई माया गर्छन् - यो केवल एउटा पेचेक मात्र होइन, यो हाम्रो जुनून हो। केहि पनि हामीलाई खुशी छ हाम्रो ग्राहकहरु लाई देखेको भन्दा खुशी, र केहि अधिक निराशाजनक भन्दा जब सम्बन्ध गडबड हुन्छ।
हामी दुबै एक महान प्रतिबद्ध छौं भनेर सुनिश्चित गर्न म संभावना अधिक काम अब अधिक समय खर्च विवाह र दुबै मायालु सम्बन्ध खोजिरहेका छन्। मँ सबै खर्चमा समस्याग्रस्त सम्बन्धमा पर्नबाट जोगिन चाहान्छु - सment्लग्नताको आकारको परवाह नगरी। खराब सम्बन्धहरूले केवल ग्राहकलाई मात्र चित्त दुखाउँदैन - यसले तपाईंको सबै क्लाइन्टहरूमा दुर्बल असर पार्न सक्छ किनकि तपाईंको समय र ऊर्जा समस्याग्रस्त सगाईलाई बचाउन खोज्दा थकित हुन्छ। यदि हामी बिक्री प्रक्रियामा केहि समस्याग्रस्त ग्राहक सुविधाहरू पहिचान गर्न सक्दछौं भने, यसले हामीलाई सडकमा सबै दुखाइ बचाउन सक्छ।
हामी केहि रमाइलो चाहन्छौं र यी अन्धकारमय समयहरूमा केही प्रकाश राख्न चाहन्छौं ... त्यसैले यो इन्फोग्राफिकले सम्बन्धको प्रकारहरूको केही उदाहरणहरू सूचीबद्ध गर्दछ जुन हामीले गरेका थियौं, दुर्भाग्यवस, यसबाट टाढा हिंड्नुपर्‍यो! प्रस्तुत गर्दै प्रेम र विवाह - एजेन्सी संस्करण.
टैग: एजेन्सीग्राहकप्रेम र विवाहविवाहसम्बन्ध
व्यक्तिगत ब्रान्डि to गर्न A बाट Z मार्गदर्शन
अप्रिल 8, 2014 मा 11: 33 एएम
ओ हो! म त्यो पर्खिरहेको छु! यो अन्ततः सार्वजनिक अवलोकनको लागि बाहिर आएको देखेर खुसी लाग्यो! शानदार!
अप्रिल 8, 2014 मा 10: 16 PM
मलाई लाग्छ कि म यी जोडीहरू मध्ये केहीसँग भएको छु, के त्यहाँ नजिकैको थेरापी समूह छ?
अप्रिल 8, 2014 मा 10: 50 PM
मैले सोचे कि हामीले हरेक हप्ता के गर्यौं!
अप्रिल 11, 2014 मा 12: 12 PM
दुखको कुरा धेरै सत्य! राम्रो भयो, अब तपाईले एउटा क्विज निर्माण गर्न आवश्यक छ जुन सम्भावित क्लाइन्टहरूले तिनीहरूलाई लुकाएर फिल्टर गर्न लिन सक्छन्!
अप्रिल 20, 2014 मा 12: 59 PM
प्रेम र विवाह (एजेन्सी संस्करण) - राम्रो! 🙂